कैलालीमा विकास बजेट खर्च सुस्त
धनगढी । कैलाली जिल्लामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च सुस्त देखिएको छ । दुवै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू. ९ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महीनाममा कुल बजेटको १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ७७ करोड मात्र खर्च कोष तथ...
निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ११ कम्पनीलाई कारबाही
महेन्द्रनगर । पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ११ ओटा निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् । कञ्चनपुर र कैलालीमा पुल तथा सडक निर्माणको ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने उक्त संख्याका कम्पनीलाई कारबाही गरिएको डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगरले जानकारी दिएको छ । कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरूमा राजेन्द...
लाली र तिगरममा भन्सार कार्यालय नखुल्दा राजस्वमा असर
माघ २, दार्चुला । छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलामा आयात कमहुँदा राजस्व संकलनमा असर परेको छ । नेपालतिर सडकमार्गको पहुँच विस्तारसँगै भारतबाट समान कम आयात हुँदा राजस्वमा ह्रास आएको हो । भारतले व्यापारका लागि वस्तु तथा सेवा शुल्क (जीएसटी) लागू गरेपछि सामान आयात घटेको बत...
सिँचाइ योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव
धनगढी । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सिँचाइ तथा तटबन्ध योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव देखिएको छ । जिल्लाका ३४ सिँचाइ तथा तटबन्ध योजना कार्यान्वयनका लागि रू. ६० करोड आवश्यक पर्ने भए पनि चालू वर्षमा रू. ९ करोड ८१ लाख मात्र बजेट प्राप्त हुँदा योजनाका काम अगाडि बढाउन समस्या देखिएको हो । चालू वर...
धनगढी–दीपायल फास्ट ट्र्याक : योजना कार्यालय स्थापना नहुँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ
धनगढी । धनगढी–दीपायल फास्ट ट्र्याक निर्माण अन्योलमा परेको छ । ३ वर्षअघि फास्ट ट्र्याकको काम अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रमेश लेखकले बीपीनगरमा योजना कार्यालय स्थापना गरेका थिए । तर, अहिले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालय म...
सिंचाई तथा तटबन्ध योजना कार्यान्वयनमा सकस : ४५ योजनाको बजेट ९ करोड ८१ लाख मात्र
पुस २९, धनगढी । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सिंचाई तथा तटबन्ध योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव भएको । ३४ सिंचाईका योजना कार्यान्वयनका लागि मात्र रू. ६० करोड आवश्यक पर्ने देखिएकोमा तटबन्धका लागि रू. ६ करोड ५ लाख तथा सिंचाईका लागि रू. ३ करोड ७६ लाख गरी चालू आवका लागि रू. ९ करोड ८१ लाख...
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन आह्वान
धनगढी (अस) । सुदूरपश्चिम प्रदेशले माघ ६ गते प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन आह्वान गरेको छ । पुस २१ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ६ गते सोमवार दिउँसो २ बजे आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रि...
बैतडीमा हिमपातले जनजीवन कष्टकर
बैतडी । बैतडीमा एक हप्तादेखि परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । शनिवारदेखि परेको हिमपातले स्थानीयको चहलपहल ठप्प भएको छ । सडकमा अधिक हिउँ जमेकाले बिहीवार दिनभर यातायात बन्द थियो । जिल्लाको खोडपे, श्रीभावर, ढोल्यामोड, सिगासधुरा, ग्वाल्लेकधुरा, शिवनाथ, देहिमाडौं, सतवाझ, सिन्केलेक, मेलौली क्षेत्रमा...
पर्यटकको तथ्यांक पर्यटन मन्त्रालयसँगै छैन
पुस २४,धनगढी । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरु भएको एक साताभन्दा बढि समय भइसकेको छ । तर भ्रमण वर्षले सुदूरपश्चिमलाई अझै छुन सकेको छैन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक कार्यक्रमकाविच भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भ भएको जानकारी गराएको समय पनि ९ दिन भइसकेको अवस्थामा समेत प्रदेशवासीले नत वाह्य पर्...
दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा
बैतडी । बैतडीका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । जिल्ला अस्पताल र दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी अनुसारका डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि अन्यत्रै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्ला अस्पताल...
वीरगञ्जमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया
प्रदेश ५ सरकारले तोक्यो गौरवका आयोजनाको मापदण्ड
बेनी–जोमसोम सडक दैनिक ८ घण्टा बन्द
पर्यटकका लागि खुल्यो अन्नपूर्ण बेसक्याम्प